မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကောင်လေးနဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကောင်လေးနဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကောင်လေးနဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
Apann Pyay 9:07 AM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
သင့်ဘ္ဒောါတစ်ယောက် မေန့ညက ကောင္မေလးခေ်ာခေ်ာလေးနဲ့ တူတူ အိပ္ခြင့်ရခဲ့ရင်တော့ သိသာလြန်းနေမွာပါ။ လေလး တစ္ချြန္ချြန္နဲ့ အေကြာင်းမရွိ အေကြာင်းရျွာပုံးနေမွာပါ။ ပြီးတော့ အေတြ့အကြုံကို မေနနိုင် မထိုင်နိုင် သင့် ကိုလျာေပျာပေနမွာပါ။
ဒါပေမယ့် မိန်းမေတြ ဆိုရင်ရော?? သင္ဘားမွာတြေ့တဲ့ မိန်းကေလး၊ လုပ်ဖ္ကောိုင္ဖက်ကောင္မေလး၊ Gym က ခ်ိတ် တိတ္တိတ်ျဖစ်နေတဲ့ ကောင္မေလး၊ သူတို့ မေန့ညက ဆက္ဆံခဲ့ရင် သင် ဘယ္လို သိပါမလဲ?? ဆံပင်ကော က်နေ တာ လား?? Bite Mark တြေလား?? အဲဒီ ရုပ်ရွင္ထဲက လက္ခဏာတြေဟာ တကယ်တော့ မွားနေပါသေးတယ်။ မိန်းမေတြ ဟာ ခန့်မွန်းရ ခက္လြန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ မေန့ညက ကံကောင်းခဲ့ကြောင်း သေခ်ာတဲ့ လက္ခဏာ ၅ ခု ရွိပါတယ်။ အဲဒါတြေကေတာ့
၁. သင့်ကို ဆြဲဆောင်နိုင္လြန်းပါတယ်
လိင္ကိစ္စမွာ တက်ကြေလေလ၊ သူမကိုယ္ခန္ဓာက Pheromone တြေ မ်ားမ်ားထြက်လေပါ။ Pheromone ဆိုတာ မိန်းကေလးတြေက ထုတ်ပေးတဲ့ သင့်ကို မရိုးမရျြဖစ်စေနိုင္တဲ့ အနံ့ပေးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတြေပါ။ အဲဒီ ပစ္စည်းတြေဟာ ဆန့်က်င္ဘက္လိင္ကို စိတ်ကြေစလာပြီး သင် သူမအနားကပ္လိုက္လို့ ကိုယ္နံ့ရတာနဲ့ သင့်ကိုယ္ထဲက အင္ဂ်င်တြေ ခုတ္လာရင်တော့ သူမ လိင္ကိစ္စရထားတာ မကြာသေးပါဘူး။
၂. သူမ ပိုပေ်ာ်နေပါတယ်
လိင္ဆက္ဆံမှု မ်ားလာလေလ၊ ပေ်ာ်ရွှင္မျှုမင့်တက္လာလေလပါ။ လူ ၁၅၀၀၀ လောက္ကို ကောက္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ်း တစ္ခုမွာ တစ္ပါတ္ကို နွစ်ကြိမ္ကေန သုံးကြိမ် လိင္ဆက္ဆံသူတြေဟာ လုံးဝ မဆက္ဆံသူတြေထက် ပေ်ာ်ရွှင္မှု ၅၅ ရာနှုန်း ပိုပါတယ်။ လူတြေဟာ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းက်င္ကသူတြေထက် လိင္ပိုဆက္ဆံရေကြာင်း သိနေရုံနဲ့ကို ပိုပေ်္ပာါတယ် တဲ့။
၃. ပုံမွန္ထက် ပိုလွေနပါတယ်
လိင္ဆက္ဆံစဥ္မွာ သင့်ခန္ဓာကိုယ္မွာျေပာင်းလဲမှုတြေ အမ်ားကြီျးဖစ္ပါတယ်။ ကြက်သားတြေျေပေလ်ာ့သြားပြီး သြေးစီး ဆင်းနှုန်း ပိုမ်ားလာပါတယ်။ ပါးလေးတြေ ပန်းရောင်သမ်းလာပြီး အီစထရိုဂ်င်ဟ္မောုန်းလယ္ဗယ်ျမင့်လာပါတယ်။ တျခား ဟာတြေ တူနေရင် ပါးလေးတြေ သြေးရောင်တောက်နေတာဟာ ကျြန်တ္တောို့ ယောက်ားတြေကို ပိုလွတယ္လို့ ထင်စေ ပါတယ်။
လိင်ပြီးဆုံျးခင်း ရထားတဲ့ အမ်ိုးသမီးတြေမွာ ဆက္ဆံပြီးပြီျးခင်း Prolactin ဟ္မောုန်း ၃၀ ရာနှုန်း ပိုတိုးလာပြီး နောက္တ စ်နေ့နေ့လည္မွာ နောက္တစ္ခါ ထပ္တိုးလာပါတယ်။ Prolactin ဟ္မောုန်းဟာ အိပ္ခ်င္စိတ္ကျိုဖစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဲ ဒါကြောင့် သူမ နေ့လည်နေ့ခင်း အိပ္ဖို့ ထြက်ြသားရင်တော့ မေန့ညက ရခဲ့တဲ့ စည်းစိမ်တြေကြာင့်ျဖစ်နိုင္ပါတယ်။
၅. လိုအပ္ခ်က်တြေ နည်းသြားပါတယ်
လူတြေမွာ တစ်ယောက္နဲ့ တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ျဖစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ လိင္ကိစ္စဟာ လူတြေကို သံယောဇဉ်ျဖစ်အောင် ကူညီပေးတဲ့ Oxytocin ဟ္မောုန်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ Oxytocin တိုးလာတာနဲ့ သူမလဲ သံယောဇဉ် ပိုရွိလာသလို ခံစား လာစေရမျွာဖစ်ပြီး သင့်ကိုပို စိတ္ခ်လာလို့ အျမဲ တြယ္ကပ္မေနေစေတာ့ပါဘူး။ Oxytocin ဟာ မိန်းမေတြကို လူမှုဆက် ဆံရေးမွာ သံသယ နည်းစေတဲ့အတြက် အစစ်ဆေးပိုတာ၊ သင့် စကားလုံးတိုင်း၊ ဖုန်ျးေပာတိုင်း လိုက္စစ်ဆေးနေတာမ်ိုး လုပ်တော့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
Credit : Gentleman